Bye..Bye: Ed Woodward Oo Kulan Degdeg Ah Ugu Yeedhay Jose Mourinho Shirka Guddida Maamulka Kooxda Ee Khamiista & Special One Oo Shandaddiisa Diyaarsaday | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Bye..Bye: Ed Woodward Oo Kulan Degdeg Ah Ugu Yeedhay Jose Mourinho Shirka Guddida Maamulka Kooxda Ee Khamiista & Special One Oo Shandaddiisa Diyaarsaday
(09-10-2018) Tababaraha Manchester United ayaa isku diyaarinaya inuu isku diyaarinaya kulan noqon karaya kii ugu dambeeyey ee uu ku hor fadhiisto Ed Woodward ka hor shirka khamiista ay iskugu imanayaan guddida maamulka (board) ee kooxdaas.
Jose Mourinho ayaa 48 saacadood gudahood lagu wargeliyey inuu ku yimaaddo xafiiska Ed Woodward oo uu ka dhici doono wada-hadal ku saabsan mustaqbalkiisa iyo xaaladda ay Manchester United ku jirto, waxaana la filayaa inay kasoo baxaan qodobbo saamayn badan yeesha oo isbeddel ah.
Sida uu qoray wargeyska The Sun ee kasoo baxa waddanka Ingiriiska, Jose Mourinho ayaa doonaya in haddii laga ogolaado inuu wakhti kale sii joogo loo ballan-qaado lacag uu bisha January kusoo iibsado ciyaartooyo, hase yeeshee ma oga waxa uu kala kulmi doono Ed Woodward oo hore gacanta uga geliyey £350 milyan oo uu ciyaartooyo kaga soo gatay suuqa, balse intooda badan ku fashilmay inay kasoo baxaan wixii laga filayey.
Maalinta Khamiista ayaa waxa shir iskugu iman doona guddida sare eee maamulka Manchester waxaanay ka wada hadli doonaan xaaladda kooxdu ku jirto iyo sida ay hoos ugu sii socoto, waxaana suurtogal ah inuu kasoo baxo go’aan lagu wargelinayo Ed Woodward inuu fasaxo Jose Mourinho haddii aanu hortood sii eryin.
Si kastaba ha ahaatee waxa ay taageereyaashu u dheg taagayaan waxa kasoo bixi doona kulanka degdegga ah ee Ed Woodward iyo Mourinho iyo weliba shirka xiga ee Khamiista ay maamulka sare yeelanayaan.